Konke okufuneka ukwazi malunga nokuhlawulwa kwe-android: izixhobo ezihambelanayo, ukubakho, amanqaku okhuseleko kunye nokunye
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Into ekufuneka uyazi nge-Android Pay: izixhobo ezihambelanayo, ukubakho, amanqaku okhuseleko kunye nokunye
Into ekufuneka uyazi nge-Android Pay: izixhobo ezihambelanayo, ukubakho, amanqaku okhuseleko kunye nokunye
Ukuhamba ngeenqwelo-mafutha, ii-hoverboards, kunye nee-pizza ezingenamanzi-ezi zizinto zonke Ukubuyela kwikamva II ebesilindele ukuba sibe nayo ngo-2015. tech umboniso bhanyabhanya owaziwayo we-sci-fi oqikelelwe-ziintlawulo ezingahlawulelwayo, ngaphandle kwemali. Ewe kunjalo, ngoku kunokwenzeka ukubetha i-smartphone yakho kwaye uhlawule i-Big Mac yakho ngqo kwi-smartphone yakho.
I-Android Pay yenye yeqonga ledigital wallet elenza ukuba oku kwenzeke. Ibhengezwe nguGoogle ebutsheni balo nyaka, iyakha into iGoogle Wallet esekwe ukuze izise iintlawulo ezingahlawulelwayo kubasebenzisi be-Android. Kukhuselekile, kulula ukuyisebenzisa, kwaye sele kwamkelwe kwinani labathengisi kulo lonke elase-US Kwaye ukuba awukabinayo i-Android Pay, nantsi iapos konke okufunayo malunga nayo.
Zeziphi izixhobo ezihambelana nokuHlawula kwe-Android?
Ukusebenzisa i-Android Pay, ufuna i-smartphone okanye ithebhulethi eqhuba i-Android 4.4 okanye ngaphezulu. Le mfuno ihlangatyezwe malunga ne-60% yezixhobo ze-Android ezikhoyo, kwaye ukuba eyakho ithengiwe kule minyaka imbalwa idlulileyo, kufanelekile ukuba ihambelane neqonga lokuhlawula likaGoogle kunye neapos. Ubuncinci xa kuziwa kwisoftware, oko kukuthi. Ungajonga uhlobo lwe-Android efakwe kwisixhobo sakho ngokuya kuseto> Malunga neDivayisi. Ayinamsebenzi ukuba yeyiphi inkonzo engenazingcingo oyisebenzisayo.
Okona kubalulekileyo, kwelinye icala, kukuba isixhobo sakho se-Android similiselwe okanye hayi. Nokuba isebenza ngesoftware okanye iROM yesiko nayo iyinto. (Ukuba awazi ukuba zeziphi ezi zinto, awulunganga)) Abasebenzisi beengcambu baya kudinga ukukhubaza amalungelo abo okufikelela ngaphambi kokusetha i-Android Pay, emva koko banokuvula ukufikelela kwakhona kweengcambu. Abasebenzisi be-Nexus kuya kufuneka baqinisekise ukuba i-bootloader yabo itshixiwe. Kwaye ukuya kuthi ga kwiiROM zesiko, uninzi lwazo kungenzeka ukuba aluhambelani nePay Pay.
I-Android Pay isebenza kwii-smartphones ze-NFC kunye neetafile ezisebenzisa i-Android 4.4 nangaphezulu
Kwicala lezinto ze-Hardware, i-Android Pay ifuna i-NFC, nonomathotholo owenza ukuba isixhobo sakho se-Android sikwazi ukunxibelelana neziphelo zePoS. Uninzi lweefowuni ze-Android zine-NFC, kunye nezinye iipilisi. Kukho okwahlukileyo okubonakalayo, nangona kunjalo. I-OnePlus 2, umzekelo, ayinayo irediyo ye-NFC kuyo, eyenza ukuba ingahambelani ne-Android Pay. Ukuba uyathandabuza, thetha neenkcukacha zethu ezinkulu ukuqinisekisa ukuba isixhobo sakho se-Android siyakwazi ukwenza i-NFC, kwaye ukuba kunjalo, qiniseka ukuba unomathotholo we-NFC unikwe amandla kuseto.
Kuya kufuneka sitsho ukuba i-Android Pay ayifuni skena somnwe ukuze isebenze. Ngokuqinisekileyo, ukuba unayo kufanelekile njengoko uza kukwazi ukugunyazisa iintlawulo ngokuskena umnwe wakho. Kodwa nokuba isixhobo sakho asinaso isikena seminwe, usenokusebenzisa iPIN okanye iphethini endaweni yoko.
Enye into esingathanda ukuyiqaqambisa kukuba i-Android Pay ayizukusebenza kwiwatchwatch yakho. Ukuhambelana ne-Android Wear kunokuza kwinqanaba elizayo ngexesha, kodwa kude kube zizinto ezinokunxitywa nguGoogle kunye neplatform yokufumana inkxaso yemveli yeNFC.
Ndingayisebenzisa phi i-Android Pay?
I-logo yeentlawulo zokunxibelelana (phezulu) i-logo ye-Android Pay (ezantsi) Ngeli xesha, i-Android Pay isebenza kuphela e-US. Kodwa ukuba iqonga likaGoogle kunye neapos liyathatha, emva koko sinokuyibona ifika kwezinye iimarike ezinkulu kwihlabathi liphela. Isivakalisi apha 'sinamandla' njengoko singenalo uphawu lwaseburhulumenteni lwento eyenzekayo. Gcina iminwe yakho iwele.
Ukuhlawulwa kwe-Android kunokusetyenziswa kwiziphelo zentengiso ezamkela iintlawulo zonxibelelwano, njengoko kubonisiwe lilogo oyibona ngasekunene. Abanye abathengisi banokuba sele beyibekile ilogo ye-Android Pay kwiikhawuntari zabo, oko kukuthi, oku kungaphezulu, kodwa kunganyanzelekanga, ukuba inkqubo yeentlawulo zikaGoogle yamkelwe.
Ngoku iya kuba lixesha elifanelekileyo lokuchaza ukuba i-Android Pay iqikelelwe ukuba iphunyezwe kwinani leapps ezithandwayo. I-Airbnb, i-Etsy, i-Expedia, i-TripAdvisor, kunye ne-Uber zezinye zeapps eziza kukuvumela ukuba ubhatale kungekudala ngeqonga likaGoogle. Kodwa asiqiniseki ukuba ezo nkqubo zizakuba nini kanye kanye. Kude kube lelo xesha, nazi ezinye zeempawu ezinokuthi zamkele ngovuyo imali yakho nge-Android Pay kwiindawo ze-PoS:
Ngawaphi amakhadi eebhanki anokusetyenziswa nge-Android Pay?
I-Android Pay isebenza ngamakhadi amakhulu etyala kunye namatyala kwiinethiwekhi eziphambili zase-US- iVisa, MasterCard, Discover kunye neAmerican Express. Apha ngezantsi luluhlu lweebhanki ezinamakhadi ekufuneka asebenze kunye ne-Android Pay, nangona kukho iiapos zihlala zilithuba lekhadi elithile elingafanelekanga kwinkonzo.
Inkulumbuso enye (iyeza kungekudala)
Umanyano lweMali yaseMelika loMkhosi
Wells Fargo usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Ngaba i-Android Pay ikhuselekile?
Akukho sistim ye-elektroniki ikhuselekile nge-100%, kodwa kuthathwe amanyathelo okuqinisekisa ukuba ukusebenzisa i-Android Pay kukhuselekile ngenene. Enye yazo kukuba olona lwazi lwekhadi lakho aluthunyelwanga xa usenza intengiselwano. Endaweni yoko, i-Android Pay isebenzisa inombolo yeakhawunti ebonakalayo kunye nekhowudi yokuqinisekisa yexesha elinye- indlela engatyhili nayiphi na idatha ebuthathaka kumthengisi. Kananjalo, wena kunye neapos; unikezwe irekhodi lokulandela intengiselwano kunye nezaziso xa kusenzeka - nanini na usebenzisa inkonzo, isixa semali nendawo esichithwe kuyo ziyarekhodwa. Umsebenzi okrokrisayo unokubonwa kwangoko. Kwaye ukuba ulahlekelwe yifowuni yakho, unokuyitshixa okanye uyisule usebenzisa uMphathi weSixhobo se-Android endaweni yokucima nawaphi na amakhadi onokubhalisa kuwo nge-Android Pay.
Ivakala kamndandi! Ngoku ndiyisebenzisa njani i-Android Pay?
Ukuqalisa nge-Android Pay yinkqubo elula. Kwisixhobo esihambelanayo, khuphela kwaye uvule usetyenziso lwePay Pay, efumaneka kwiVenkile yokuDlala. Emva koko landela imiyalelo.
Uthanda ungathandi, kuya kufuneka usete iscreen soluhlobo oluthile. Kungenxa yemali yakho kunye nedatha & ukhuseleko, emva kwayo yonke loo nto. Kwaye hayi, ayifanelanga ukuba ibe likhadi lakho kunye ne-PIN.
Okwangoku ungaskena ikhadi lakho ngesixhobo sakho sekhamera okanye ufake iinkcukacha zalo ngesandla. Nje ukuba ikhadi lakho libhaliswe, awunakho ukukhululeka ukuqala ukuyisebenzisa. Ikhadi lokuqala olibhalisayo liya kuba lelakho elingagqibekanga, kodwa wena ukhululekile ukongeza ngaphezulu kwaye utshintshe phakathi kwabo ukuba kukho imfuneko.
Qaphela ukuba awunyanzelekanga ukuba uvule usetyenziso ukuze wenze intlawulo. Sebenzisa i-Android Pay, vula nje ifowuni yakho kwaye uyibeke ngaphezulu kwesiphelo. Gcina ukhumbula ukuba ukuba ufuna ukubuyisa into, unokucelwa iinombolo ezine zokugqibela zenombolo yeakhawunti yakho, esele siyichazile ngasentla. Inombolo yakho ifumaneka kwi-Android Pay. Kwaye khumbula ukuba irisithi yakho evela kumrhwebi yeyona nto isebenza njengobungqina bokuthenga. Qiniseka ukuba ubambelele kuyo ngenxa yeerekhodi zakho.
Kukho iinkcukacha ezizezinye esifuna ukuzikhankanya, njengoko abanye benu sele benamakhadi asetelwe ukuhambisa kunye nokuhlawula kwiWalethi kaGoogle. Kwimeko apho la makhadi engahambelani ne-Android Pay, ungaqhubeka nokuwasebenzisa, kodwa okwexesha elimiselweyo.
Khuphela Ukuhlawulwa kwe-Android ukusuka kwiVenkile yokuDlala kuGoogle
izikhombisi: Ukuhlawulwa kwe-Android , Iphepha loNcedo lokuHlawula i-Android , WonderHowTo
I-T-Mobile icacisa ukuphuma kwayo ngoMvulo kwaye kutheni ingazukuphinda yenzeke
I-Samsung Galaxy S8 vs Apple iPhone 7: eyona ilungileyo
I-Sprint ibonelela nge-iPhone 8 BOGO isivumelwano kunye ne- $ 300 isaphulelo kwi-iPhone X ngokurhweba ngaphakathi